မြင့်မားသောကာဗွန်သံမဏိဘောလုံးကို - တရုတ် Viproce စက်မှုဇုန်
ဒီအမျိုးအစားဘောလုံး HRC60 မိဖို့ခိုင်မာစေနှင့်အဆင့်မြင့်ဝန် ယူ. အမှုခိုင်မာစေဘောလုံးထက်ပိုရှည်ဘဝပေးသွားမှာပါမှတဆင့်ဖြစ်ခြင်း၏ကြိုတင်ရှိသည်။
1. ပစ္စည်း AISI1086 / C85 / 1,0616 / EN8-9 / ရက်သတ္တပတ်များ 1,1269
2. Size ကို Range 1mm-180mm
3. အဆင့် G40-1000
4. ခွန်အားဖြစ် 60 မိ။ (မှတဆင့်-hardend) HRC
5. ကို Characteristic (က) Core-ခိုင်မာစေ
နိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဘောလုံးကိုထက် (ဂ) အဆင့်မြင့် Load နှင့်ကြာကြာဘဝ
6. သံလိုက် ဟုတ်ကဲ့
7. လျှောက်လွှာ အနိမ့်ရညျအသှေးဝက်ဝံ, စက်ဘီး
9.Packing စံ: 10kg သို့မဟုတ် 20kg စက္ဏူထူနှုန်း, pallet နှုန်း 1 တစ်တန်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောဖောက်သည်အဖြစ်
11.Delivery အချိန် တိုတောင်းတဲ့အချိန်သို့မဟုတ် 35 ရက်အတွင်း Stock ။
1010 ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
1015 ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
1020 ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
1085 ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
1086 ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
စက်ဘီးကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
အမြင့်ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို
Solid ကာဗွန်သံမဏိ Ball ကို